किन यस्तो हर्कत गर्छन् पूर्वयुवराज पारस शाह ?::News from Nepal
काठमाडौं २६ असार । यही महिनामात्रै पूर्वयुवराज पारस शाहका विभिन्न कमजोरी र गल्ती बाहिर आएका छन् । उनी सुध्रिन थालेको बताइए पनि सार्वजनिक ठाउँमा उनले हर्कत देखाउन छाडेका छैनन् ।
शिव सेना नेपालका अध्यक्ष अनिल बस्नेत ‘बाबा’, पूर्वमहानिरीक्षक हेमबहादुर सिंहका छोरा गे ? बस्त्रधारी प्रभञ्जन सिंहसँगै बाबु ज्ञानेन्द्र शाहको जन्मोत्सव मनाउन नेपालगञ्जतिर लाग्ने क्रममा भैरहवामा देखिएका थिए उनी ।